We Fight We Win. -- " More than Media ": နာဆာ နဲ့ SMART GOAL အပိုင်း (၃)
နာဆာ နဲ့ SMART GOAL အပိုင်း (၃)
" ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် က စပြီး မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်နေကြပြီလို့ မြန်မာ့အရေးလေ့လာသူ အများက သုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။ တချို့ ပညာရှင်တွေ က တော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာရဲ့ စမ်းသပ်ခန်းထဲ မှာ ရောက်နေပြီလို့ ဝေဖန် သုံးသပ်ခဲ့ကြပြန် တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကို တကယ်ပဲ ဦးတည်နေသလား၊ အလောင်းကောင် ကို မိတ်ကပ်ဖို့ နေတဲ့ အစမ်းသပ်ခံ အဆင့်မှာ ပဲ ဒီမိုး၊ ဒီလှေ ဒီလူတွေနဲ့ ပဲ ရှိနေကြအုန်းး မလားဆိုတာ က မေးခွန်း ထုတ်စရာ ဖြစ်နေတယ်။ "
Changes require actions on the ground, not on media or speeches.
" The central requirement for the improvement of governance and institutional quality in Burma is the removal of the military from its central position of power."
တကယ်တော့ တိုင်းပြည် တပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့မှာ လက်တွေ့ကျတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ ကို အဆင့်ဆင့် ထားရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလို လက်တွေ့ကျတဲ့ ရည်မှန်းချက် လုပ်ငန်းတွေ ကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ဖို့ ကလည်း အရည်အချင်းရှိတဲ့ သူတွေနဲ့ ပြောင်းလဲပြီး တာဝန် ပေးအပ် ဖို့ လိုအပ်ပေလိမ့်မယ်။ တနည်းအားဖြင့် SMART goal တွေ ကို လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ SMART ဖြစ်တဲ့ သူတွေလိုအပ်တယ်။
ဥပမာ အားဖြင့် တချိန်က ဆင်းရဲမွဲတေခဲ့တဲ့ အိမ်နီးချင်းတရုတ်နိုင်ငံ မှာ တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေ ရဲ့ တိုင်းပြည်အပေါ်ထားရှိတဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် အဆင့်ဆင့်တွေ ၊ အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အမြော်အမြင် ကြီးမားမှုတွေ ကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ တိုင်းပြည်မှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျော့နည်းလာဖို့ တနှစ်ကို လူဦးရေ ၁၅ မီလီယံကျော် အစာရေစာငတ် မွတ်ခေါင်းပါးမှု၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးနေမှုတွေ ကို ပပျောက်ဖို့ တိုက်ဖျက်မယ်လို့ ရည်မှန်းချက်ထားရှိခဲ့တယ်။ ဒီလို အခြေအနေတွေ ကို ရောက်ရှိဖို့ ကို လည်း နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ကို တရှိန်ထိုးပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေထဲမှာ ထင်ရှားတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေကတော့ ၁၆ ကြိမ်မြောက် တရုတ်ပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ကွန်ဂရက် ကနေ လူကော၊ မှုဝါဒဆိုင်ရာပါ ပြောင်းလဲမှုတွေ ကိုတွေ့လာခဲ့ရတယ်။ တရုတ်ပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ၁၆ ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရက် က စတင်ပြီး တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှာ အရည်အချင်းရှိကြတဲ့ လူငယ် အင်ဂျင်နီယာ နှင့် သိပ္ပံဘွဲ့ရ အတက်ပညာရှင် တွေ ကို နေရာပေး အစားထိုးခန့်အပ် လာတာ တွေ့ရတယ်။ ဒီ လူငယ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေက ဦးဆောင်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု တွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ် ပါတီ ၁၆ ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရက်က ၀ါစဉ်အလိုက် ထုတ်ပြန်တဲ့ စာရင်းအတိုင်းပြောပြရယင်-
၁)မစ္စတာ ဟူကျင်တောင်၊ ဘေဂျင်းမြို့ ရှင်ဟွာတက္ကသိုလ်က ရေအားလျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရ
၂) မစ္စတာ ၀ူဘန်ကျို၊ ရှင်ဟွာတက္ကသိုလ်က အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရ
၃) မစ္စတာ ၀မ်ကျင်းဘောင်၊ ၊ ဘူမိဗေဒပညာရှင် နှင့် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရ
၄) မစ္စတာ ကျန်ကျင်လင်း၊ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရ၊
၅)မစ္စတာ ဇန်ကျီဟုန် ၊ ဘေဂျင်းတက္ကသိုလ်မှ ဒုံးပျံအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရ
၆) မစ္စတာ ဟော်ဂျူး ရှင်ဟွာတက္ကသိုလ်က လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရ၊
ရ) မစ္စတာ ၀ူရှင်ဇန်၊ ရှင်ဟွာတက္ကသိုလ်က အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရ၊
၈) မစ္စတာ လီရှန်ချွန်း၊ ဟာဘင်တက္ကသိုလ်မှ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရ၊
၉) မစ္စတာ လျှိူခမ် ဂျာမဏီဖရိုင်ဘတ်တက္ကသိုလ် မှ သတ္တုဗေဒဘွဲ့ရ တွေပါ။
မဟာတံတိုင်းကြီး နောက်ကွယ်မှ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ. Future Sino-Burma Relation at Risk
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲမွဲတေမှု အညွှန်ပြ ဇယားများ
ဒီလို တရုတ်အစိုးရ အတွင်း စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၊ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၊ အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာ အစားထိုး ပြောင်းလဲလာမှုကြောင့်လည်း တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း လူဦးရေသန်းပေါင်း၂၅၀ ကျော်ဟာ အစာရေစာ ငတ်မွတ် ခေါင်းပါးမှု၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးနေမှု မှ သန်းပေါင်း ၅၀ ထိ လျှော့ချနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နောက်ဆုံးထားပြီး ကျန်တဲ့ လူပေါင်း သန်းပေါင်း ၅၀ ကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးနေမှုမှ ပပျောက် နိုင်အောင် အပြီးသတ်တိုက်ဖျက်သွားမယ်ဆိုတာ ဟာ လက်တွေ့ကျတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ အဖြစ် ကမ္ဘာ က အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ တနည်း အားဖြင့် သဘာဝကျတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေဖြစ်ပြီး ၊ အရည်အချင်းပြည့်ဝသူတွေနဲ့ အစားထိုးခဲ့လို့ လည်း လက်တွေ့ကျကျလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေက စပြီး မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်နေကြပြီလို့ မြန်မာ့အရေးလေ့လာသူ အများက သုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။ တချို့ ပညာရှင်တွေ က တော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံတကာ စမ်းသပ်ခန်းထဲ မှာ ရောက်နေပြီလို့ ဝေဖန် သုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ လ ပိုင်း က မြန်မာစစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအတွင်း က ပွင့်လင်းမှုမရှိ၊ ရိုးသားမှု မရှိတဲ့ ဖြစ်စဉ်လေး တခု ကိုလေ့လာ ကြည့်ရအောင်။
မြန်မာအစိုးရ ရဲ့ ဒုတိယ သမ္မတ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ တင်အောင်မြင့်ဦးဟာ စင်္ကာပူမှာ ဆေးကုသ ခံယူပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုပြန်ရောက်ချင်း ရာထူးက အနားယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ အစိုးရနှင့် နီးစပ်တဲ့ အသိုင်းအသိုင်းက နေတဆင့် သတင်းမီဒီယာ တွေမှာ ထုတ်ဖော်ရေးသား ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။ ဒီ သတင်းဟာ မှန်ကန်မှုမရှိဘူး။ မမှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေ ဖော်ပြရေးသားဖော်ပြ နေတာကြောင့် ပုဂ္ဂလိက နှင့် လူထု သတင်းမီဒီယာတွေကို အရေးယူဖို့ထိတောင် အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေက ခြိမ်းချောက်ခဲ့ကြတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ အစိုးရ ရဲ့ သတင်းစာထဲမှာ ဒု သမ္မတ တင်အောင်မြင့်ဦးဟာ အသစ်ဖွဲ့စည်းတဲ့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီ အသစ်မှာ ဆက်လက်တာဝန်ယူ ပါဝင်နေတဲ့အကြောင်း၊ ဒု သမ္မတ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး ၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေအရ အနားယူရန် တင်ပြထားသော နုတ်ထွက်လွှာကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က လက်မခံသေးဘဲ ဆေးခွင့် နှစ်လ ခွင့်ပြုထား
ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် ပိုင် သတင်း စာနှင့် သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ပြန်လည်ပြီး ဝေေ၀ဆာဆာဖော်ပြ ခဲ့ကြပြန်တယ်။
တဖက်မှာ က ရာထူးတွေ ချီမြင့်၊ တာဝန်တွေ တိုးမြင့်ပြီးပေးအပ်ခံခြင်းခံနေရသူ က ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် သာသနဘောင် ကို ၀င်၊ ရဟန်းဝတ်ပြီး လူဝတ်လဲ အနားယူနေချင် နေတဲ့သူ ဖြစ်တယ်။
ရဟန်းဘောင်ကနေ ၊လူဝတ်လဲ သေဖို့စောင့်နေတဲ့လူကို နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဆိုသူက အမြော်အမြင်ရှိရှိ တိုင်းပြည် ကို ဦးဆောင်ဖို့ တာဝန်ပေးအပ်နေမှု၊ အလောင်းကောင် ကို ပွဲထုတ်မှု အလေ့အကျင့်ဆိုးတွေကြောင့် တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက် တကယ်ပဲ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းကို ဦးတည်ပြီး သွားနေသလား ဆိုတာကတော့ ဒီနေရာမှာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေတယ်။ “ My dog's playing is good, because of my dog” ဆိုတဲ့ ဒဿန အတွေးအခေါ် ဆရာကြီး ဆိုကရေးတီးရဲ့ Ethics လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ ကျင့်ဝတ်တရား အကြောင်းဆိုင်ရာ နှိုင်းယှဉ်မှု စာသားကို သတိရမိတယ်။ တိုင်းပြည် အကျိုးအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ လုပ်ဆောင်တဲ့ နေရာမှာ ဒီလို ဖြစ်စဉ်မျိုး ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ၊ ဂုဏ်းဂဏ စွဲ တွေဆက်လက်ရှိနေမှု၊ ပွင့်လင်းမှုရိုးသားမှု မရှိ၊ အမှန်တရား ကို လက်ခံမှုမရှိသ၍ လည်း မြန်မာပြည်ရဲ့ အနာဂတ်နှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ အခက်အခဲတွေ၊ စိမ်ခေါ်မှုတွေ ဆက်လက်ရှိနေပေလိမ့်မယ်။
လက်ရှိ တိုင်းပြည် ကို ဦးဆောင်မဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့ရဲ့ ဒု သမ္မတ နေရာ ကို ခန့်အပ်ခြင်းခံရမဲ့ သူဟာ အထီးလား၊အမ လား ဆိုတာ ပြည်သူ က ကွဲကွဲပြားပြား မသိရှိသေးသလို၊ တိုင်းပြည်နှင့် ပြည်သူ့အကျိုးအတွက် တ၀န်ပေးအပ်ခြင်းခံ ရမည့် သူ ကိုလည်း ပြည်သူ က ရွေးချယ်ခွင့် မရှိဖြစ်နေတယ်။ လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးထဲက လွှတ်တော် ဥက္ကဌ အပါအ၀င် လွှတ်တော် အမတ်တွေက လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ကို စမ်းသပ်ဖို့အတွက် နိုင်ငံတကာ လှည့် လေ့လာရေး ခရီးတွေ သွားလာနေဆဲ။ ရာစု နှစ်တ၀က်ကျော် အစမ်းသပ်ခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အခုလည်း ဒီမို၊ဒီလေ၊ ဒီလူတွေနဲ့ပဲ လွှတ်တော်နိုင်ငံရေး ဆိုတဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ စမ်းသပ်ခန်းတခုထဲ မှာ ရှိနေဆဲပါလို့ တချို့ နိုင်ငံရေးပညာရှင်တွေ က ပြောဆိုနေကြတယ်။ ဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကို တကယ်ပဲ ဦးတည်နေသလား၊ အလောင်းကောင် ကို မိတ်ကပ်ဖို့ နေတဲ့ အစမ်းသပ်ခံ အဆင့်မှာ ပဲ ဒီမိုး၊ ဒီလေ၊ ဒီလူတွေနဲ့ ပဲ ရှိနေအုန်းးမလားဆိုတာ က မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေတယ်။
တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခေတ်နဲ့ မဆီလျော်တော့တဲ့ ၊ လက်တွေ့မကျတော့ တဲ့ ရည်မှန်းချက် တွေ၊ သုံးမရတဲ့ လူတွေ မှုတွေ ကို နာဆာလို ပြတိုက်ထဲ ကို ပို့သင့်နေပါပြီ။ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့ ရည်မှန်းချက်တွေ တူကြပေမဲ့ လူကော၊မူကော၊ အလေ့အကျင့် နှင့် အကျင့်ဆိုးတွေကော မပြောင်းချင်ကြဘူး ဆိုရင်တော့ ဒီတိုင်းပြည်ဟာ နယ်ပယ် အသီးသီးမှာ ကျဆုံးမှုတွေနဲ့ ဆက်လက် ရင်ဆိုင်နေရပါလိမ့်မယ်။ "